Ny olona anefa mitombo isa hatrany. Mahazo vahana ihany koa ireo tsy ara-dalàna, indrindra fa ireo mpivarotra, antony nanosika azy ireo hanatona ny kaominina Ampitatafika Atsimondrano izay mpiara-miasa aminy voalohany eto Madagasikara. Nampiofana ireo mpiasa tao amin’ity kaominina ity izy ireo amin’ny fampiasana ny teknolojia avo lenta amin’ny fitakian-ketra na ny TPE ( Terminal de paiement electronique) omaly. Tanjon’ny roa tonta ny hahafahana mamantatra ny rehetra ao anatin’ny kaominina Ampitatafika tokony handoa hetra sy ny hampitomboana ny tahan’ny fampidiran-ketra araka ny tokony ho izy. Fitaovana manara-penitra no hampiasan’ireo percepteur sy regisseur miisa 12 amin’izany. Hatreto mantsy, raha ny fanazavan’ny Ben’ny tanàna Rado Ramparaoelina dia mbola manodidina ny 40 % hatrany ny tahan’ny fampidiran-ketra eo anivon’ny kaominina Ampitatafika raha mba niakatra 50 % tamin’ny taona 2007. Tena hanampy betsaka ny kaominina Ampitatafika raha ny nambarany ny fiaraha-miasa amin’ity orinasa iray ity satria sady hanara-maso ny asan’ireo tompon’andraikitra voakasika no hampitombo ny tahan’ny fampidiran-ketra ihany koa. Tsiahivina fa i Japon sy i Sina ary i Israel no efa mampiasa ny TPE amin’ny fitakian-ketra ankehitriny.